ကျွန်ုပ် ၏ အကောင့် လိုက်နာရန် စည်း ကမ်းများ FAQ အကူအညီ
ဂိမ်း နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု တွေကို ဘာကြောင့် မမြင်ရတာလဲ?
တစ်ချို့ ဖုန်းအမျိုးအစား၊ ဖုန်း ဆောဖ့်ဝဲလ် နဲ့ အင်တာနက် စနစ် တို့မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Android ဗားရှင်း ၄.၀ အနိမ့်ဆုံးရှိတဲ့ ဖုန်း အားလုံး နီးပါးနဲ့ IOS ဖုန်း အားလုံး နီးပါး ဖြင့် ဒီ ဝန်ဆောင်မှုက်ု အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ဖုန်း ကမော်ဒယ် တော်တော် ဟောင်း နေရင်သော် လည်းကောင်း၊ အရမ်း နောက်ဆုံးပေါ် ဖြစ်နေရင်သော်လည်းကောင်း သို့ မဟုတ် သင့်ဖုန်း ရဲ့ အင်တာနက် စနစ် နဲ့ ကိုက်ညီသော ဂိမ်း နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Gamer Heaven ကို ဘယ်လို ဝင်ရောက်ရမလဲ?
သင့် ဖုန်းရဲ့ အင်တာနက် စနစ် မှ တဆင့် http://tmm.gamerheaven.8elements.mobi သို့ဝင်ရောက်လိုက်ပါ။ bookmark မှတ်ထားဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော်။
GamerHeaven မှာ ဘာတွေ ရနိုင်လဲ?
GamerHeaven ဆိုတာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ကစား ဖို့အတွက် ရာပေါင်း များစွာသော အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှု တွေ ပါဝင်တဲ့ မိုဘိုင်းလ်း ထုတ်ကုန် ဝန်ဆောင်မှု တခုပါ။ မြန်မာ ပြည်မှာရှိတဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဝန်ဆောင်မှု တွေ အားလုံးထက် ရွေးချယ် တံဆိပ် နဲ့ ထုတ်လုပ်မှု တွေ ပိုမို ပြည့်စုံ ပြီး အများအပြား ကို ယူဆောင်လယပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ http://tmm.gamerheaven.8elements.mobi သို့ ဝင်ရောက်ပြီး ဂိမ်းအသစ် တွေ၊ ထိပ်တန်း ဂိမ်း တွေ (သို့) မတူညီတဲ့ ဂိမ်း အမျိုးအစား တွေ ထဲ မှာရှာကြည့် ပြီး သင့် စိတ် ကြိုက်ကိုရှာဖို့ အတွက် ထုတ်လုပ်မှု တစ်ခု ခြင်းစီ ရဲ့ အသေးစိတ်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာပြီး တော့လဲ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း က ဘယ်လောက်လဲ?
ဂိမ်း အများစုမှာ ၅၀၀ (သို့) ၁,၀၀၀ ဖြစ်သော်လည်း နာမည်ကြီး တံဆိပ် ဂိမ်းများ အတွက်တော့ အဲဒီလောက် က မများ ပါဘူး လို့ထင်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ကျပ် တန် အကောင်းစား အဆင့်မြင့် သီးသန့် ဂိမ်းများ လည်းရှိ ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကတော့ GamerHeaven အဖွဲ့ ကို ဝင်ပြီး ဂိမ်းအားလုံး ကို ၅၀% အလျော့ နဲ့ ရယူလိုက်ပါ။
GamerHeaven အဖွဲ့ ကို ဘာကြောင့် ဝင်ရမှာလဲ။?
GamerHeaven အဖွဲ့ ဝင် ထားသူ အနေနဲ့ အခွင့်ထူး များစွာ ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်း တွေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အတွက် အပါတ်စဉ် လက်မှတ်4စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်း တွေ ကို လည်း ၅၀% လျော့ ဈေးဖြင့် ဝယ်ယူ ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ လင့်ခ် အတိုင်းသွား ၍ အဖွဲ့ ဝင် ထား ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ ကို ကိုယ်တိုင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။http://tmm.gamerheaven.8elements.mobi/Club
ဂိမ်းဝယ်လိုက် ပေမယ့် ဖုန်းထဲရောက်မလာဘူး?
ပထမဦးစွာ ကျေးဇူးပြု၍ သင့် ဖုန်း ၏ ဒေါင်းလုဒ် ဖိုင်တွဲ ကို စစ်ဆေးပါ။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပေမယ့် install မလုပ် ရသေးတာဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ ဒေါင်းလုဒ် ဖိုင်တွဲ ထဲမှာ ရှိနေ လျှင် install လုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဤ သို့ မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်ုပ် အကောင့် စာမျက်နှာ သို့ သွား ၍ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး ပြီ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ မရှိသေးပါက ဒေါင်းလုဒ် ကို ပြန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မရသေးဘူးဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ကို သင့်ရဲ့ ဟန်းဆက်မော်ဒယ်၊ operating system , မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်နှင့် ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ် ဂိမ်း ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မရကြောင်း ပြောပြပါ။
ဝန်ဆောင်မှု ကို ရယူမည်ဟု သဘောတူ ပြီးမှ ရယူပြီးမြောက် ခြင်း မရှိဘူးဆိုလျှင် တစ်ခါတစ်ရံ တွင် သင် ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူ ရန် တောင်းဆိုမှု နဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ကို မရရှိတာမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ဝိုင်ဖိုင် (WiFi) ကိုပိတ်လိုက်ပါ၊ ဝန်ဆောင်မှု ကိုရယူမည် ဟု နှိပ်လိုက်ပါက သင်၏ ဖုန်း နံပါတ် ကိုထည့် ရမည့် ပေ့ချ် ကိုရောက် သွားမည် ဖြစ် သည်။ သင့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့် ပြီးပါက SMS ဖြင့် ကုဒ်တစ်ခု ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပြီး သင်ကထိုကုဒ်ကို ထည့် ပေး၍ ENTER ကိုနှိပ်ခြင်း ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
ဖေ့ဘုဒ် စာမျက်နှာမှာ ဘာကြောင့်ဖုန်းနံပါတ် ကိုပေးရတာလဲ?
တစ်ခါတစ်ရံ တွင် သင် ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူ ရန် တောင်းဆိုမှု နဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ကို မရရှိတာမျိုး ဖြစ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဝန်ဆောင်မှု ကိုရယူမည် ဟု နှိပ်လိုက်ပါက သင်၏ ဖုန်း နံပါတ် ကိုထည့် ရမည့် ပေ့ချ် ကိုရောက် သွားမည် ဖြစ် သည်။ သင့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့် ပြီးပါက SMS ဖြင့် ကုဒ်တစ်ခု ပို့ပေးမည် ဖြစ်ပြီး သင်ကထိုကုဒ်ကို ထည့် ပေး၍ ENTER ကိုနှိပ်ခြင်း ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
ဂိမ်း ကို ကစားဖို့ ဖွင့်လို့ မရဘူး?
အကယ်၍ ဂိမ်းဖွင့်လို့ မရဘူး ဆိုပါက ဂိမ်းကိုယ်တိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သော သင့်ဖုန်း၏ အင်တာနက် စနစ်၊ သင်အသုံးပြုနေသော အင်တာနက် စသောအကြောင်းအရာ များကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဂိမ်းအားလုံးဟာ အွန်လိုင်းဖြစ်တဲ့ အတွက် အင်တာနက် မြန်နှုန်း အပေါ်မူတည် နေပါသဖြင့် ခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပြီးပြန်လည် ဖွင့်ကြည့်ပါ။ အဆင်မပြေဘူး ဆို ပါက ကျွန်ုပ်တို့ ထံ သို့ ဖုန်း၏မော်ဒယ်၊ အသုံးပြုနေသောစနစ်၊ အဆင်မပြေ သော ဂိမ်းနာမည် တို့ ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Gamerheaven ကနေ ဂိမ်း တွေဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အပတ်တိုင်း သင်တို့အား ဂိမ်း လက်မှတ် ပေးပါတယ်။ လက်မှတ် တစ်ခုချင်းစီ ကို ဂိမ်း ၁ ခုစီ နဲ့ လဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏စုစုပေါင်း လက်မှတ် အရေအတွက်ကို သိရှိရန် ကျွန်ုပ် အကောင့် စာမျက်နှာ တွင် စစ်ဆေးနိုင် ပြီး အမိုက်စား ဂိမ်း တွေ လဲလှယ်ဖို မ့မေကြနဲ့ နော်။
ပထမဦးစွာ သင်၏ဝိုင်ဖိုင် (WiFi) ကိုပိတ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဖုန်းအင်တာနက် ဒေတာမှ တစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်ပါ။ ပြီးလျှင် သင့် ရဲ့ ဖုန်း နံပါတ် ကို အသုံးပြုရန် အတွက် “CONTINUE” (သို့) “CONSENT” (သို့) “OK” ကိုနှိပ်ပါ။ (အရေးကြီးသည့် လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ ကို သေချာဖတ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်) အပေါ်ဆုံး ခေါင်းစီး၊ Join Now လင့်ခ် ၊ ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူမယ်စာတန်း (သို့) ဂိမ်းတွေ ရဲ့ "ရယူမယ်" လင့်ခ် ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ဝန်ဆောင်မှု ၏ ရပိုင်ခွင့် များနှင့် စည်းကမ်းချက်များပါရှိသော ပင်မ စာမျက်နှာ ကို ရောက်ရှိသွားပါမယ်။ သင် အပတ်စဉ် ဝန်ဆောင် မှုကို ရယူရန် သေချာပါက "JOIN NOW" (သို့) "ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူမယ်"!(သို့) "ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူလိုပါသည်" (သို့) "အိုကေ" လင့်ခ် ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သင့် ဖုန်းနံပါတ် ကို မတွေ့ရပါက ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ပေါ်လာမည့် အပြင် SMS စာတိုဖြင့် လျှို့ဝှက် နံပါတ် ကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုပါက "ကျွန်ုပ် အကောင့်" ပေ့ချ် သို့သွား၍ "ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းမည်" ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
GamerHeaven ကနေ ဂိမ်း ဘယ်လို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မလဲ?
သင် ကြိုက်နှစ်သက်သော ဂိမ်းကို နှိပ်၍ ပေါ်လာသော လမ်းညွှန် အတိုင်းလိုက် ၍ သင်၏ဖုန်းထဲ သို့ ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ် လိုက်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်ဒ် လုပ်ပြီးပါက ဖုန်းထဲကို install သွင်း၍ ကစားနိုင်ပါပြီ။
GamerHeaven ကို tmm.gamerheaven.8elements.mobi မှဝင်ရောက်သည့် အခါ error စာတမ်း ပြနေပါတယ်?
သင့်ဖုန်း ၏ အင်တာနက် ချိတ်ဆက် မှု နှင့် အင်တာနက် စနစ် စသည့် အကြောင်း အရာ များ နှင့် သက်ဆိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပထမဦးစွာ သင့်ဖုန်း၏ အင်တာနက် setting မှ WEB (သို့) WAP ချိတ်ဆက်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ ပြီးလျှင် သင့်ဖုန်း ၏ 3G (သို့) 4G စနစ်တို့ ကို စစ်ဆေးပြီး အင်တာနက် ချိတ်ဆက် မှုကိုသေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ အင်တာနက် စနစ် မှ နေ၍ သင်အသုံးပြုနေသော ဖုန်း လိုင်းဝန်ဆောင် မှု ကုမ္ပဏီ ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ သင် ၏ အင်တာနက် setting ပိုမို မှန်ကန်ရန် အကူ အညီ လိုအပ် ပါ က သင်အသုံး ပြုနေသော ဖုန်း လိုင်းဝန်ဆောင် မှု ကုမ္ပဏီ ကို ဆက်သွယ် ခြင်း (သို့) အနီးဆုံး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ဆိုင်သို့ သွားခြင်း တို့ ဖြင့် အကူအညီ ရယူနိုင်ပါသည်။
လိုက်နာရန် စည်း ကမ်းများ အကူအညီ FAQ ©2022 8elements. All rights reserved.